Shirka Cardiiff lagu Qabanayo ee loo isticmaalayo cashuurtii dan yarta Somaliland 21.09.2013 By Yuusuf Abdilaahi. | Burco Media
Shirka Cardiiff lagu Qabanayo ee loo isticmaalayo cashuurtii dan yarta Somaliland 21.09.2013 By Yuusuf Abdilaahi.
September 20, 2013 | Filed under: Articles-Maqaallo | Posted by: farxaan
La tuma durbaanada iyo TV Qaranka oo ka hurda arimaha jaaliyadaha.”
La tuma durbaanada: Qurbo jooga Somaliland waa dad aan ku heesin shilimaad loo soo diro, waa dad iyagu isbedelka keena oo Kulmiye iyo isbedelkiisii si mug leh u keenay, weliba Cardiiff waa laantii ugu horaysay ee Kulmiye ee laga furo UK, si baaxad leh ayay u golle keeneen guushii, maanta xaqna maaha dawna maaha in la yidhaahdo hebel iyo hebel in mashruuc loogabaahanyahay Somaliland oo lagu mashaxaradyo jaaliyadah debeda: la tuma durbaanada.
La tuma durbaanada: oo lago soo abaabuly magaalda Birmigham, waxaad moodaa baryahan denbe dad faro ku tiris ah oo magaalada Cardiff jooga iyo shikhsi dhowaan ka yimi Smaliland oo degan magaalada Birmingham inay ku shuraakoobeen kala kaxaaynta dadka iyo jaaliyada Cardiff.
La tuma durbaanada: markii sheekada la soo geliyay magaalda Cardiff ayaa dakii iyo waayeelkii is yedhaahdeen u cagli celiya dadkan faro ku tiriska ah ee mashruuca loo soo dhiibay.
La tuma durbaanada :Jaaliyada oo jecel in wax kasta oo magaalada ka jira in la miisaamo oo aanu marnaba wax hadal ahi ka imanin. Faro ku tiriskii way ka dhago adaygeen dadkii iyo jaaliyadaba, si mashruucu ugu hirgalo ayay is yedhaahdeen bedela mashruuca ilaa marka hoolka la soo galo mooye, dadkii Cardiif bay ku yidhaahdeen waxaa la furyaa TV Qaranka Somaliland oo aan cid wax ka ogayn marka loo leexdo maamulka sare.
La tuma durbaanada: mashruucii waxuu marayaa in la soo kireeyo meelaha ugu qaalisan magaalda cardiif, meeshaas soo ah Wales Milleniem Centre oo ah hoyga fanka iyo suugaanta Cardiif. Hadda Jaaliyada ayaa bixinaysa kharash ayaa arrinku ahaa, tolow yaa bixiyey!
La tuma durbaanada: Qoraalada danbe ayaan idiinku soo bandhigi doonaa mashruuca cidii keentay iyo wixii khalad ku ah Somliland iyo Jaaliyada dibada (Cardiif). In lacag la soo diro oo magaalo kasta la yidhaahdo dabaal dega oo na ammaana, waxa lagu dabaaldegayona ay tahay hantidii iyo cashuurtii dan yarta reer Somaliland waa wax caqliga iyo damiirka intaba dhaafsiisan. Masuuliyiinta ama dadka masuuliyiinta sheeganaya ee magaca ku raadinaya xafladaha ee xidhiidhka la leh madaxtooyada, waanu soo sheegi doonaa qoraalada danbe, kuwa meel banaysanaya waanu sheegi doonaa ee xil doon ka ah.
kala socda saacadah danbe dadkii mashruucan ku hesheeyay iyo magacyadoodaba.ku tuma durbaanada
la tuma durbaanada: Shimbirayahowy heesa, ku heesa cashuurtii dan yarta reer Somaliland
Jaaliyada Somaliland Ee Cardiff
Yusuf Abdillahi Cardiff UK